ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်နှင့်စေတနာ့ဝန်ထမ်းအရက်သောက်ပြီးနောက် (၂၀၁၄) - သင့် ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်ပေါ်အလှပြုပြင်
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်စဉ်နှင့်မိမိဆန္ဒအလျောက်အရက်စားသုံးမှုပြီးနောက် Dopamine ဖြန့်ချိ Dynamics ကိုပြောင်းလဲခြင်း (2014)
PLoS တစ်ခုမှာ။ 2014 မေလ 1;9(5): e96337 ။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0096337 ။
စွန်ပလွံ S က, Nylander ငါ.
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မူးယစ်ဆေးဝါးများသုံးစွဲဖို့ဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးချင်းစီကိုပိုမိုရှိုင်းအောင်မြင့်မား Impulse နှင့်အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ အစောပိုင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနောက်ပိုင်းမှာအသက်တာ၌ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်များအတွက်တိုးမြှင့်အန္တရာယ်မှဆက်နွယ်နေကြောင်းပေမယ် neurobiological အခြေခံမသိရသေးဖြစ်ပါတယ်။ ဦးနှောက်ကဒီတစ်ကြိမ်မှာမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်နှောင့်အယှက်စဉ်အတွင်းကျယ်ပြန့်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတိုးမြှင့်အားနည်းချက်မှအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ရန်တွေးဆကြသည်ခြင်းကိုသည်းခံ။ အဆိုပါ compulsive မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမှထိန်းချုပ်ထားခြင်းမှအကူးအပြောင်းများနှင့်စွဲဟာ dorsal striatum ၏စုဆောင်းမှုနှင့်အလေ့အထဖွဲ့စည်းခြင်းမှစူးရှသောအားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြန်ဖြေခြင်း, နျူကလိယ accumbens နေပြောင်းကုန်ပြီအပါအဝင်အာရုံကြောကွန်ရက်မှာကြာရှည်အပြောင်းအလဲများကိုပါဝငျသညျ။ ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်တစ် pharmacological စိန်ခေါ်မှုပြီးနောက်တိုးမြှင့် dopamine လွှတ်ရာအယူအဆစမ်းသပ်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဒီလေ့လာမှုက။ ပိုတက်ဆီယမ်-evoked dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်လွှာမှအစောပိုင်းနှောင်းပိုင်းဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်စိတ်ကြွဆေးကစိန်ခေါ်မှုနှင့်အတူပေါင်းစပ် chronoamperometric dopamine အသံသွင်း အသုံးပြု. စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ဤဆိုးကျိုးများအပေါ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းမိမိဆန္ဒအလျောက်အရက်စားသုံးမှု၏အကျိုးဆက်များကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါဒေတာများကိုလွှတ်ပေးရန် dopamine ၏ရေကူးကန်အသက်အရွယ်နှင့်အတူတိုးပွါးကြောင်းအကြံပြုသည်ယခင်လေ့လာမှုများ supporting, အသက်နှင့်အတူ evoked dopamine လွှတ်ပေးရန်တစ်တဖြည်းဖြည်းတိုးမြှင့်ပြသပါ။ ဆနျ့ကငျြ, အသက်နှင့်အတူ evoked လွှတ်ပေးရန်အတွက်တဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းသွားအငယ်တိရိစ္ဆာန်များအတွက် dopamine တစ်အချိုးကျပိုကြီးတဲ့သိုလှောင်မှုရေကူးကန် supporting, စိတ်ကြွဆေးတုံ့ပြန်တွင်တွေ့မြင်ခဲ့သည်။ မိမိဆန္ဒအလျောက်အရက်စားသုံးမှုပြီးနောက် Dopamine အတိုင်းအတာအရက် dopamine များလွှတ်ပေးရန်ရေကူးကန်အပေါ်သက်ရောက်မှုနှင့်ဤစွဲလမ်းနှင့် dorsal striatum အတွက် dopamine နဲ့ပတ်သက်တဲ့သည်အခြားစိတ်ရောဂါ diagnoses မှအားနည်းချက်များအတွက်သက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါညွှန်း, ပိုတက်စီယမ်-ကလိုရိုက်မှတုန့်ပြန်နိမ့်လွှတ်ပေး amplitude ခဲ့သည်။
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မူးယစ်ဆေးဝါးများသုံးစွဲဖို့ဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးချင်းစီကိုပိုမိုရှိုင်းအောင်မြင့်မား Impulse နှင့်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအမူအကျင့်နှင့်ဆက်စပ်နေသည် ။ နီကိုတင်း, အရက်သို့မဟုတ်ဆေးခြောက်ဖွယ်ရှိ psychostimulants သို့မဟုတ် opiates မတိုင်မီစမ်းသပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်း ,  စောစောမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနောက်ပိုင်းမှာအသက်တာ၌တိုးမြှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန် (Sud) မှဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ပါတယ် -။ Sud ၏ဤတိုးမြှင့်စွန့်စားမှုအခြေခံအဆိုပါ neurobiology မသိရသေးပေမယ့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကျယ်ပြန့်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်ပုံမှန်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏နှောင့်အယှက်များနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုပြီးနောက်တိုးမြှင့်အားနည်းချက်မှအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ရန်တွေးဆနေပါတယ် .
အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးလေ့အကျိုးကို system ပေါ်တွင်ပြုမူနှင့်စူးရှစားသုံးမှုပြီးနောက်နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine ၏ extracellular အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့် ။ သို့သော် compulsive အသုံးပြုခြင်းနှင့်စွဲဖို့ကနဦးမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကနေအကူးအပြောင်းအတွက်အာရုံကြောကွန်ရက်များအများအပြားအတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာတည်မြဲအပြောင်းအလဲများကိုပါဝင်ပတ်သက်နေ  သူတို့ကိုတပါး dorsal striatum ၏စုဆောင်းမှုနှင့်အလေ့အထဖွဲ့စည်းခြင်းမှစူးရှသောအားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြန်ဖြေခြင်း, နျူကလိယ accumbens နေပြောင်းကုန်ပြီပါဝင်မှတွေးဆနေပါတယ် ။ အဆိုပါ dorsal striatum အတွက် dopaminergic လှုပ်ရှားမှုထို့ကြောင့်လည်းဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးချင်းစီ၏အားနည်းချက်အတွက်အချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များကဤယန္တရားများကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥာဏ်အကြီးအအရေးပါမှု၏ဖြစ်ကြပြီးကြွက်များတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အဖြစ်ဖော်ထုတ်အသက်ပြတင်းပေါက် postnatal နေ့က (PND) 28 နှင့် 50 ကြား . ယခင်လေ့လာမှုများဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ dopamine လွှတ်ပေးရန်တစ်လျှော့ချ Basal နှုန်းအလွယ်တကူဖြန့်ချိ dopamine တစ်ဦးလျှော့ရေကူးကန်, ဒါပေမယ့်လည်း dopamine ၏ပိုကြီးတဲ့သိုလှောင်မှုရေကူးကန်ရှိသည်ပြခဲ့ကြs . ဒါဟာအစ pharmacological စိန်ခေါ်မှုများအားဖြင့်နှိုးဆွပေးလျှင် Basal အခြေအနေများအောက်၌လျှော့ချ dopamine လွှတ်ပေးရန်နေသော်လည်း, ဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးချင်းစီကိုပိုမို dopamine လွှတ်နိုင်မည်အကြောင်းကြောင်းအကြံပြုထားသည် ။ ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်၏ပထမဦးဆုံးဆယ်ကျော်သက်တိရိစ္ဆာန်များအတွက် pharmacological စိန်ခေါ်မှုပြီးနောက်တိုးမြှင့် dopamine လွှတ်ရာအယူအဆစမ်းသပ်ဖို့ထို့ကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်လွှာမှတစ်အစောပိုင်းနှောင်းပိုင်းဆယ်ကျော်သက်များတွင်စိတ်ကြွဆေးများကစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်အဖြစ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ, outbred Wistar ကြွက်များနှင့်အတူပေါင်းစပ် chronoamperometric dopamine အသံသွင်း အသုံးပြု. စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။
ဤလေ့လာမှု၏ဒုတိယရည်ရွယ်ချက်မှာမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းမိမိဆန္ဒအလျောက်အရက်စားသုံးမှုအားဖြင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ဒီနောက်ကွယ်မှကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ယခင်လေ့လာမှုများထိုကဲ့သို့သော intraperitoneally အုပ်ချုပ်ခွင့်အရက်အဖြစ်ဆယ်ကျော်သက်ကာလအတွင်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းအချက်တွေ, dopamine ၏ Basal extracellular အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်ကြောင်းပြသသောခဲ့တယ်  အရက်- သာ. နှစ်သက် P ကိုကြွက်များတွင်မိမိဆန္ဒအလျောက်အရက်စားသုံးမှု Basal extracellular အဆင့်ဆင့်ထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲ, dopamine လွှာမှတိုးမြှင့်နေစဉ် ။ ဒီလေ့လာမှုတွေအကြားကွာဟမှုတွေဖြစ်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်း၏လမ်းကြောင်း, ဆေးထိုး, ကြွက်မျိုးများနှင့်အတိအကျကိုအချိန်ကာလအဖြစ်အချက်များ, တစ်ဦးကိုအရေအတွက်အားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်နှစ်ဦးစလုံးကိစ္စများတွင်, ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအရက်စားသုံးမှုဟာ dopamine ဒိုင်းနမစ်သက်ရောက်သည်နှင့်ဤထပ်မံစုံစမ်းစစ်ဆေးကောင်းစွာကျိုးနပ်သည်။
အားလုံးတိရစ္ဆာန်အစမ်းသပ်ချက်ဟာ Uppsala တိရိစ္ဆာန် Ethical ကော်မတီကအတည်ပြုတဲ့ protocol ကိုအောက်တွင်ဖျော်ဖြေခြင်းနှင့်တိရိစ္ဆာန်စမ်းသပ် (တိရိစ္ဆာန်လူမှုဖူလုံရေးအက်ဥပဒေ SFS1998: 56) ရက်တွင်ဆွီဒင်ဥပဒေပြုရေးများ၏လမ်းညွှန်ချက်များနောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့ကြနှင့်ဥရောပ Communities ကောင်စီညွှန်ကြားချက် (86 / 609 / EEC) ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင် Wistar ကြွက် (RccHan: WI, Harlan Laboratories BV, Horst, အဆိုပါနယ်သာလန်) ကိုယ်ဝန်နေ့က 16 မှာတိရိစ္ဆာန်စက်ရုံရောက်ရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါတိရိစ္ဆာန်များအတွက် chronoamperometric အသံသွင်း၏အချိန်ကိုက်လိုက်လျောညီထွေနိုင်ရန်အတွက်ရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာကျော်နေသည်ဟုသူရောက်ရှိလာသည်။ အဆိုပါရေကာတာ macrolon လှောင်အိမ်ထဲမှာတစ်ခုတည်းသျောခဲ့ကြသည် (59 စင်တီမီတာ× 38 စင်တီမီတာ× 20 စင်တီမီတာ) တောင့်အစားအစာ (Type R36; Lantmännen, Kimstad, ဆွီဒင်) နဲ့နဲ့ရေကိုအသာပုတ် ကြော်ငြာ libitum။ အဆိုပါအိတ်များသစ်သား-chip ကိုအိပ်ယာနှင့်စက္ကူစာရွက်များ (40 × 60 စင်တီမီတာ; Cellstoff, Papyrus) ပါရှိသောနှင့်တိရစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုထမ်းတို့ကတစ်ချိန်ကတစ်ပါတ်ကိုပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။ 22 နံနက်: အဆိုပါတိရိစ္ဆာန်အခန်းထဲမှာပုံမှန် 1 ဇအလင်း / 50 မှာပေါ်အလင်းအိမ်နှင့်အတူမှောင်မိုက်သံသရာအပေါ်စဉ်ဆက်မပြတ်အပူချိန် (10 ± 12 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) နှင့်စိုထိုင်းဆ (06 ± 00%) မှာသိုထားခဲ့ပါတယ်။ အားလုံးအခန်းပေါင်းတိရစ္ဆာန်နှောက်ယှက်နိုင်တယ်လို့မျှော်လင့်မထားတဲ့အသံ minimize လုပ်ဖို့မျက်နှာဖုံးနောက်ခံဆူညံသံရှိခဲ့ပါတယ်။
စမ်းသပ်အကြမ်းဖျင်းခြုံငုံသုံးသပ်တွင်တွေ့နိုင်ပါသည် ပုံ 1။ ထိုနေ့ (postnatal နေ့က (PND) 0) မှာမွေးဖွားခဲ့သောအမှိုက်သရိုက်များမိခင်ရေကြောင်းစိတ်ဖိစီးမှု, မိခင်အပြုအမူများနှင့်မျိုးရိုးဗီဇအဘို့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက်6အထီးနှင့်အ4အမျိုးသမီးထည့်သွင်းရန် Cross-များတိုးပွားလာကြခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါခွေးများ PND 22 အပေါ်ကိုနို့နှင့် chronoamperometric အသံသွင်းခဲ့သည့်အခါ PND3(± 28 နေ့က) သို့မဟုတ် PND 1 (± 42 နေ့က) သည်အထိလှောင်အိမ်နှုန်း 1 သျောခဲ့ကြသည်။ သာအထီးခွေးများနောက်ထပ်ဒီလေ့လာမှုအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ သုံးဆယ်အထီးကြွက်များ၏တစ်ဦးကအုပ်စုတစ်စု PND20 မှ PND28 ကနေ Two-ပုလင်းအခမဲ့-ရွေးချယ်မှုပါရာဒိုင်းအတွက် 65% အီသနောမှမိမိဆန္ဒအလျောက်မူးရူးကဲ့သို့ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါတိရစ္ဆာန်များ, ခြောက်လပတ်ကြာသပတေးနေ့မှတဆင့် 24 နာရီ 18 အစည်းအဝေးများတစ်ဦးစုစုပေါင်းတစ်ပတ်လျှင်သုံးရက်ဆက်တိုက်အီသနောမှဝင်ရောက်ခွင့်, ဆိုလိုသည်မှာအင်္ဂါနေ့ပေးထားခဲ့ကြသည်။ အီသနောစားသုံးမှု၏အစီအမံအဘို့, ပုလင်းမတိုင်မီအလေးချိန်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီ session တစ်ခုနှင့်ဂရမ်ပြီးနောက်ကီလိုဂရမ်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်နှုန်းသန့်စင်သောအီသနောတွက်ချက်ခဲ့ကြသည်။ ပုလင်းရာထူးအနေအထား preference ကိုရှောင်ရှားရန်အစည်းအဝေးများအကြားပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအီသနော-သောက်သုံးတိရိစ္ဆာန်များတစ်ဦးချင်း PND 28 သည်အထိ PND 70 ထံမှသျောခဲ့ကြသည်။ အမြင့်ဆုံးတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာအီသနောစားသုံးမှု (ဆ / ကီလိုဂရမ်) နှင့်အတူတိရိစ္ဆာန်များကိုရှေးခယျြခဲ့သညျမြားနှငျ့လြှပျစစျအသံသွင်းပြီးတော့ (70 ရက်ပေါင်း±) PND2မှာလုပ်ခဲ့ကြသည်။ အသက်အရွယ်-လိုက်ဖက်ရေသောက်သုံးထိန်းချုပ်မှုကိုလည်းအလားတူကာလအတွင်းမှာတစ်ဦးချင်းသျောခဲ့ကြသည်။
ပုံ 1 ။ အဆိုပါစမ်းသပ်ဆဲအကြမ်းဖျင်း။
အီး = အီသနော-အရက်သောက်, PND = postnatal နေ့, W = ရေသောက်။
Doi: 10.1371 / journal.pone.0096337.g001
Dopamine ၏ Chronoamperometric ခံ In Vivo
Inactin, Nafion 5% solution ကို, dopamine Hydrochloride, L-အက်စ်ကောဘစ်အက်ဆစ်, ပိုတက်စီယမ်ကလိုရိုက်, ဆိုဒီယမ်ကလိုရိုက်, ဆိုဒီယမ်ဖော့စဖိတ်, ကယ်လစီယမ်ကလိုရိုက်နှင့် D-စိတ်ကြွဆေး sulfate Sigma-Aldrich, LLC (စိန့်လူးဝစ်, MO ကို, အမေရိကန်နိုင်ငံ) မှရရှိသောခဲ့ကြသည်။ Kerr စေးကပ်ဖယောင်း DAB Lab AB (Upplands Väsby, ဆွီဒင်) မှရရှိသောခဲ့သည်။ ကာဗွန်ဖိုင်ဘာ microelectrodes (SF1A; 30 μmအရှည်× 150 μmပြင်အချင်း) (Teflon-insulator တွင်လည်း 200 μm) Quanteon ထံမှဝယ်ယူခဲ့သည်, LLC (Nicholasville, KY, အမေရိကန်နိုင်ငံ), ရည်ညွှန်းလျှပ်ကူးပစ္စည်း, ငွေဝါယာကြိုးလေးစနစ်များ Inc ကို (ထံမှဝယ်ယူခဲ့သည် အဆိုပါ micropipettes များအတွက် Carlborg, WA, အမေရိကန်နိုင်ငံ) နှင့်ဖန်သွေးကြောမျှင်ကလေးများ၏ (0.58 မီလီမီတာအတွင်းအချင်း) ကမ္ဘာ့ဖလား Precision တူရိယာ, Ltd (Stevenage, ဗြိတိန်) မှဝယ်ယူခဲ့သည်။
Dopamine အသံသွင်း PND 28 (± 1 နေ့က), PND 42 (± 1 နေ့က) သို့မဟုတ် (70 ရက်ပေါင်း±) PND2မှာလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ခွဲစိတ်ကုသခြင်းမတိုင်မီလြှပျစစျအသံသွင်းဖို့ချက်ချင်းဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ တစ်ဦးကရေ-ပျံ့နှံ့နေတဲ့အပူ pad ပါ (Gaymar စက်မှုလုပ်ငန်း, Inc, Orchard ပန်းခြံ, နယူးယောက်) ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါတိရစ္ဆာန်များ (ip) intraperitoneally Inactin 125 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်နှင့်အတူ anesthetized နှင့် stereotaxic ဘောင် (Stoelting Co. , Wood က Dale က IL, အမေရိကန်နိုင်ငံ) တွင်ထားရှိခဲ့ကြသည်။ ဦးခေါင်းခွံထဲမှာတစ်ဦးကအပေါက်ဟာလျှပ်ကူးပစ္စည်းများအတွက်မှတ်တမ်းတင် site ကို overlying တူးခဲ့သည်, အခြားသောအပေါက်ဟာ Ag / AgCl ရည်ညွှန်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းများ၏နေရာချထားများအတွက်မှတ်တမ်းတင် site မှဝေးလံခေါင်သီတူးခဲ့သည်။
dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်လွှာမှ၏ high-speed chronoamperometric အသံသွင်း။
high-speed chronoamperometric တိုင်းတာ (1 Hz နမူနာနှုန်း 200 ms စုစုပေါင်း) သည်ယခင်ကဖော်ပြထားလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ FAST16-mkII မှတ်တမ်းတင်စနစ် (Fast သရုပ်ခွဲ Sensing နည်းပညာ, Quanteon, LLC, Nicholasville, KY, USA) ကို အသုံးပြု. ဖျော်ဖြေခဲ့ကြ ။ ကာဗွန်ဖိုင်ဘာ microelectrodes (SF1A) ပထမအပေါ်ယံပိုင်းမီနှင့်တစ်ဦးချင်းစီအပေါ်ယံပိုင်းပြီးနောက်5ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ 200 မိအပူနှင့်အတူ Nafion သုံးခုအင်္ကျီနှင့်အတူ coated ခဲ့ကြသည် ။ အဆိုပါလျှပ်ထို့နောက်ချိန်ညှိခဲ့ကြ စသည်တို့အတွက် 0.05 က M ဖော့စဖိတ်အသုံးမပြုခင်ရွေးချယ်မှု, detection စနစ်၏ကန့်သတ် (လောဒမွို့) နှင့်ဆင်ခြေလျှောဆုံးဖြတ်ရန်ဆား buffered Vivo အတွက် ။ အဆိုပါ microelectrodes2±6ပျမ်းမျှဆက်စပ်မှုကိန်း (R2) နဲ့, dopamine ၏အမှတ်စဉ်ဖြည့်စွက် (0.999-0.0003 μM) မှ linear တုံ့ပြန်မှုပြသခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုမှာအသုံးပြုအားလုံးလျှပ်ပျမ်းမျှ selection အက်စ်ကောဘစ်အက်ဆစ်ကျော် dopamine များအတွက် 14482 ± 3005 μMဖြစ်ခဲ့သည်။ ပျမ်းမျှလောဒမွို့ 0.026 ± 0.004 μM dopamine, အပျမ်းမျှဆင်ခြေလျှော -1.00 ± 0.03 Na / μM dopamine ဖြစ်ခဲ့သည်။ dopamine ၏ရည်ညွှန်းအထွတ်အထိပ်တုံ့ပြန်မှုစဉ်အတွင်းတိုင်းတာပျမ်းမျှလျှော့ချရေး / ဓာတ်တိုးအချိုးအများစု dopamine ၏ထောက်လှမ်း၏ညွှန်ပြဖြစ်သော 0.67 ± 0.02 ခဲ့သည် ။ တစ်ဦးကငွေအဝါယာကြိုးအဖြစ်ချထားတဲ့နှင့်အသုံးပြုခဲ့သည် Vivo အတွက် ag / AgCl ရည်ညွှန်းလျှပ်ကူးပစ္စည်း .
Vivo စမ်းသပ် protocol ကိုပါ။
တစ်ဦးက micropipette (10-15 μmအတွင်းအချင်း) isotonic ပိုတက်စီယမ်ကလိုရိုက်ဖြေရှင်းချက် (120 MM KCl, 29 MM NaCl, 2.5 MM CaCl နှင့်ပြည့်စုံလေ၏2· 2H2တစ်ဦး pipette-ဖြည့်ဆေးထိုးအပ် (7.2G ကမ္ဘာ့ Precision တူရိယာ, Aston, ဗြိတိန်) ကို အသုံးပြု. အို) (pH ကို 7.4-28) ။ အဆိုပါ micropipette စေးကပ်ဖယောင်းသုံးပြီးကာဗွန်ဖိုင်ဘာအစွန်အဖျားကနေ 150-200 μmခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် affixed ခဲ့သည်။ + 1.0 မီလီမီတာ, L ကို: အဆိုပါလျှပ်ကူးပစ္စည်း stereotactically အဆိုပါ dorsal striatum, AP ထဲတွင်နေရာခဲ့သည် bregma ထံမှ + 3.0 မီလီမီတာ, အ incisor ဘားအသက်အရွယ်နှင့်အလေးချိန်နှင့်အညီချိန်ညှိခဲ့သည် , ။ အဆိုပါလျှပ်ကူးပစ္စည်းပိုင်းတွင်ပြုလုပ်လျှော့ချဖို့ micromanipulator (Narishige အင်တာနေရှင်နယ်လီမိတက်, လန်ဒန်, ဗြိတိန်) ကို အသုံးပြု. မှတ်တမ်းတင် site ကိုမှ dorsal (-3.0 မီလီမီတာ) ထားရှိများနှင့်တစ်ဦးရန်လျှော့ချမခံရမီနှင့် ပတ်သက်. 45-60 မိများအတွက်တည်ငြိမ်သောအခြေခံရောက်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည် bregma ထံမှ -4.0 မီလီမီတာ၏အတိမ်အနက်ကို။ အဆိုပါလျှပ်ကူးပစ္စည်းထို့နောက် dopamine လွှတ်ပေးရေးအပေါ်ပိုတက်စီယမ်ကလိုရိုက်၏တစ်ခုတည်းသောဆေးထိုး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုစိတ်ပိုင်းဖြတ်ခင်အခြား 5-10 မိမှတ်တမ်းတင် site ကိုမှာတည်ငြိမ်ခွင့်ရခဲ့သည်။ အဆိုပါပိုတက်စီယမ်ဖြေရှင်းချက်ဒေသအလိုက်တစ်ဦး PicoSpritzer III ကို (က Parker Hannifin ကော်ပိုရေးရှင်း, ထင်းရူး Brook, NJ, USA) နှင့်ဖိအား (10-20 psi) နှင့်အချိန် (0.5-1.0 s) 100 nl ကယ်လွှတ်ခြင်းငှါညှိခဲ့ထိန်းချုပ်ထားဖိအားထွတ်သုံးပြီးလျှောက်ထားခဲ့သည် တစ်ဦး eyepiece ပိုက်ကွန်တွေနဲ့တပ်ဆင်တဲ့ခွဲစိတ်ခန်းသုံးအဏုဖြင့်တိုင်းတာသည့်ပိုတက်စီယမ်ဖြေရှင်းချက် .
ပိုတက်ဆီယမ်လွှတ်ပေးရန်စိတ်ကြွဆေးသို့မဟုတ်ဆား၏အရေပြားအောက်ဆုံးထိုးနှင့်အတူပေါင်းစပ်အသုံးပြုခဲ့သည် evoked ။ လွှဲခွင်အလားတူသုံးခုကိုကိုးကားထိပ်ထုတ်လုပ်ခဲ့ 10 ဆိတ်ကွယ်ရာ min ။ ငါးမိနစ်ကနောက်ဆုံးရည်ညွှန်းအထွတ်အထိပ်ပြီးနောက်ကြွက်ဖြစ်စေပေးထား2/ ကီလိုဂရမ်စိတ်ကြွဆေးသို့မဟုတ်ဆားနှင့်ညီမျှငွေပမာဏ (1 ml / ကီလိုဂရမ်) Mg နှင့်အခြား5မိလွှတ်ပေးရန်ပြီးနောက်နောက်တဖန် 10, 5, 15 မှာထိပ်ထုတ်လုပ်သည် 25 မိ evoked ခံခဲ့ရခံခဲ့ရ , 35, 45, 55 နှင့် 65 မိသည့်စနစ်တကျဆေးထိုးပြီးနောက်တွေ့မြင် ပုံ 2A ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးသဲလွန်စသည်။ စိတ်ကြွဆေး၏ဆေးထိုးစက်ခေါင်းများနှင့် Self-အုပ်ချုပ်ရေးလေ့လာမှုများအတွက်အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများအပေါ်အခြေခံပြီးရွေးချယ်ခဲ့သည် -.
ပုံ2။ ကိုယ်စားလှယ်ခြေရာတွေကို။
စိတ်ကြွဆေးနှင့် B ကိုလက်ခံရရှိ postnatal နေ့က 28 မှာကြွက်များအတွက်ဓာတ်တိုးလက်ရှိ) လွှဲခွင်နှင့် T80 တွက်ချက်ခဲ့ကြသည်ဘယ်လိုဖေါ်ပြခြင်းအတူတူတိရိစ္ဆာန်အဘို့ဒုတိယရည်ညွှန်းအထွတ်အထိပ်တစ်ဦးအနီးကပ်တက်၏ A) ကိုတစ်ဦးကကိုယ်စားလှယ်သဲလွန်စ။ amp = လွှဲခွင်, အခြေစိုက် = အခြေခံ, Ref = ရည်ညွှန်း။
Doi: 10.1371 / journal.pone.0096337.g002
လျှပ်ကူးပစ္စည်းနေရာချထားခြင်းနှင့်ချန်လှပ်၏ verification ။
အဆိုပါလျှပ်ဖြတ် left ရာဌာန၌အချောစမ်းသပ်မှုအပြီးနှင့်ဦးနှောက်အေးခဲကြ၏။ အဆိုပါနေရာချထားကို frozen ဦးနှောက်၏ sectioning ကစိစစ်ခဲ့သည်။ PND12 မှာ 28 တိရိစ္ဆာန်များမှ, 1 ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မှတ်တမ်းတင်အမှားကြောင့်အမှားများနေရာချထားနှင့်2မှဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သည်။ PND 12 မှာ 42 တိရစ္ဆာန်များအဘို့, 1 တိရိစ္ဆာန်ကြောင့်အမှားများနေရာချထားဖို့ဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သည်။ PND 16 မှာ 70 တိရစ္ဆာန်များအဘို့,3ကြောင့်မှတ်တမ်းတင်အမှားများမှဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သည်။ PND 16 မှာ 70 အီသနော-သောက်သုံးတိရစ္ဆာန်များအဘို့,2ကြောင့်မှတ်တမ်းတင်အမှားများမှဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သည်။ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းအမှားအယွင်းများ pipette ပိတ်ဆို့မှုနှင့်ထိုကဲ့သို့သောပါဝါဖြတ်တောက်မှုနှင့်အသံဖမ်းယူနစ်မှအထွေထွေ power supply ၏နှောင့်အယှက်အဖြစ်လျှပ်စစ်နှောင့်အယှက်များပါဝင်သည်။
အဆိုပါ evoked ထိပ်၏အလုပျသငျလွှဲခွင်နှင့်အထွတ်အထိပ်ယင်း၏လွှဲခွင် (T80) ၏ 80% အထိကျဆင်းများအတွက်အချိန် Fast ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း software ကိုဗားရှင်း 4.4 (Quanteon, LLC, Nicholasville, KY, USA) ကို အသုံးပြု. တွက်ချက်ခဲ့ကြသည်တွေ့ ပုံ 2B ကိုယ်စားလှယ်သဲလွန်စသည်။ ကိုးကားထားသောထိပ်သုံးခုအားပျမ်းမျှအားဖြင့်ထိုအမြင့်၏ရာခိုင်နှုန်းကိုဆေးထိုးပြီးနောက်အမြင့်ဆုံးသို့တွက်ချက်သည်။ စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအဘို့, ကှဲလှဲ၏ထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (ANOVA) အသက်အရွယ်သို့မဟုတ်သောက်သုံးအုပ်စုများနှင့်ကုသမှု (ဆားသို့မဟုတ်အမ်ဖီတမင်း) အကြားအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ chronoamperometric data တွေကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်, Fisher ကရဲ့အနည်းဆုံးသိသိသာသာခြားနားချက် (LSD) Post-hoc စမ်းသပ်မှု။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဖြန့်ဝေခြင်းမရှိသောအီသနောစားသုံးမှုအချက်အလက်များအတွက် Friedman ANOVA ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာလေ့လာဆန်းစစ်မှုများကို Stata 10 (StatSoft Inc. , Tulsa, OK, USA) ကို အသုံးပြု၍ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ခြားနားချက်များ p <0.05 မှာကစာရင်းအင်းသိသိသာသာစဉ်းစားခဲ့ကြသည်။
အသက်အုပ်စုများအကြားရည်ညွှန်း amplitude အတွက်ကွာခြားချက်များမှာပြနေကြသည် ပုံ 3။ ANOVA အသက်အရွယ်နှင့်အချိန်နှိုင်းယှဉ်တစ်ဦးကထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံ, အသက်၏အဓိကသက်ရောက်ပုံများအားပြသခဲ့သည် [F (2,22) = 5.81; p = 0.009], ဒါပေမယ့်အချိန်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက် [F (2,44) = 1.43; p = 0.25] သို့မဟုတ်အချိန်နှင့်အသက်အရွယ်အကြားမည်သည့်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု [F (4,44) 1.70 =; p = 0.17] ။
ပုံ3။ ကွဲပြားခြားနားသောအသက်အရွယ်အတွက်အထွတ်အထိပ် amplitude ရည်ညွန်း။
အသက်အရွယ်သုံးအုပ်စုတွင်အမ်ဖီတမင်း (သို့) ဆားဖြင့်ကုသမှုမတိုင်မီရည်ညွှန်းထားသောထိပ်သုံးခု၏လွှဲခွင် (μM) (ဆိုလိုသည်± SEM) ။ postnatal နေ့ (PND) 28, 42 နှင့် 70. ** p <0.01 ။
Doi: 10.1371 / journal.pone.0096337.g003
အသက်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်မှု [F (2,24) = 1.02; p = 0.38], [F (2,48) 0.94 = အချိန်လည်းရှိ၏ p = 0.40] သို့မဟုတ်အချိန်နှင့်အသက်အရွယ် [F (4,48) 0.22 =; p = 0.93] ရည်ညွှန်း T80 တန်ဖိုးများကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ယုတ် (SEM) ကိုကိုးကား T80 တန်ဖိုးစံအမှား±ယုတ် 17.3 အဆိုပါ PND 1.3 နှင့် PND28 များအတွက် 19.5 ± 0.9 အဘို့, PND 42 များအတွက် 20.5 ± 1.0 70 ±ခဲ့ကြသည်။
စိတ်ကြွဆေးမှလွှဲခွင်တုံ့ပြန်မှုအတွက်အသက်အရွယ်အုပ်စုများအကြားကွာခြားချက်များမှာပြနေကြသည် ပုံ 4A-C မှာ။ အမ်ဖီတမင်းဆေးကုသမှုကြောင့်အသက်အရွယ်၏အဓိကသက်ရောက်မှုများ [F (2,26) = 3.95; p = 0.03], ကုသမှု [F ကို (1,26) = 10.77; p = 0.003] နှင့်အချိန် [F ကို (6,156) = 3.32; p = 0.004] နှင့်အချိန်နှင့်အသက်အကြားအပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုများ [F (12,156) = 2.23; p = 0.01] အချိန်နှင့်ကုသမှု [F (6,156) = 4.20; p <0.001] ဒါပေမယ့်အသက်နှင့်ကုသမှုအကြားမျှအပြန်အလှန် [F (2,26) = 2.37; p = 0.11] သို့မဟုတ်အချိန်၊ အသက်နှင့်ကုသမှု [F (12,156) = 0.77; p = 0.68] ။
ပုံ4။ ကွဲပြားခြားနားသောအသက်အရွယ်အတွက်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ amplitude နှင့် T80 တုံ့ပြန်မှု။
ဆား (သို့) အမ်ဖီတမင်းဆေးထိုးခြင်းပြီးနောက် (အေ - SEM) ဆိုလိုသည်မှာ၊ အေ) မီးဖွားပြီးနောက် (PND) ၂၈၊ ခ) PND ၄၀ နှင့် C) PND ၇၀ အရဆားသို့မဟုတ်အမ်ဖီတမင်းဆေးထိုးခြင်းပြီးနောက်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှတုံ့ပြန်မှုများ၊ D ကို PND 28, E) မှာ T42 တန်ဖိုးများ PND 70 နှင့် F) PND 80. * p <28, ** p <42, *** p <70 မှာဆားထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, #p <0.05, PND 42 ရှိအချိန်သတ်မှတ်အချိန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ p p <0.05, °° p <0.01, °°° p <0.001 နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ PND 70 ရှိအချိန်အမှတ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, §p <0.05, §§p <0.01, §§§p <0.001 PND 28 မှာညီမျှအချိန်အမှတ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။
Doi: 10.1371 / journal.pone.0096337.g004
စိတ်ကြွဆေးဖို့ T80 တုံ့ပြန်မှုမှာပြသ ပုံ 4D-E။ အသက်၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိ [F (2,25) = 1.87; p = 0.17] ဒါပေမယ့်ကုသမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ [F (1,25) = 26.52 ရှိ၏ p <0.001] အချိန် [F ကို (6,150) = 7.70; p <0.001] နှင့်အချိန်နှင့်ကုသမှုတစ်ခုအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု [F (6,150) = 12.29; p <0.001] ။ အသက်နှင့်ကုသမှုအကြားအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုမရှိပါ [F (2,25) = 1.29; p = 0.29] အချိန်နှင့်အသက် [F (12,150) = 0.66; p = 0.78] နှင့်အချိန်၊ အသက်နှင့်ကုသမှုအကြားအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု [F (12,150) = 1.60; p = 0.098] ။
အဆိုပါ chronoamperometric အသံသွင်းရာတွင်အသုံးပြုခဲ့ကြသော 14 ကြွက်များအတွက်အီသနောစားသုံးမှုဒေတာမှာပြသနေကြသည် စားပွဲတင် 1။ တစ်ဦးလမ်းကြောင်းသစ် [χရှိခဲ့ပေမယ့်တစ်ဦးက Friedman ANOVA, အချိန်ကျော်စားသုံးမှုအတွက်မပါသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုပြသ2 = 9.80; အောက်ပါရက်သတ္တပတ်ထက်အနည်းငယ်ပိုမြင့်သောဒုတိယရက်သတ္တပတ် (PND 0.08-35) အတွင်းစားသုံးမှုအားဖြင့်မောင်းနှင်ကွဲပြားမှု, ဆီသို့ဦးတည် p = 37] ။ အဆိုပါ preference ကိုတစ် Friedman ANOVA အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတစ်ဦးတိုး [χပြသ2 = 19.7; p = 0.001] အဓိကအားဖြင့်ပထမဦးဆုံးသုံးပတ်ကျော်ကတိုးနေတဲ့ရလဒ်အဖြစ်တွေ့ စားပွဲတင် 1.
စားပွဲတင် 1 ။ အဆိုပါပျမ်းမျှ, နိမ့်ဆုံးနှင့်အမြင့်ဆုံးအရက်စားသုံးမှု (ဆ / ကီလိုဂရမ် / 24 ဇ) နှင့်ဦးစားပေး (%) အရက်လက်လှမ်းနှင့်ပျမ်းမျှများ၏ခြောက်ပတ်အတွင်းအဘို့, နိမ့်ဆုံးနှင့်အမြင့်ဆုံးတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာစားသုံးမှု (ဆ) 18 အစည်းအဝေးများအပြီး။
Doi: 10.1371 / journal.pone.0096337.t001
အဆိုပါ ethanol- နှင့်ရေ-သောက်သုံးအုပ်စုများအကြားရည်ညွှန်း amplitude အတွက်ကွာခြားချက်များမှာပြနေကြသည် ပုံ 5။ ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်ထားသော ANOVA သောက်သုံးသောအုပ်စုနှင့်အချိန်ကိုနှိုင်းယှဉ်လျှင်သောက်သုံးသောအုပ်စု၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြသခဲ့သည် [F (1,17) = 16.22; p <0.001] ဒါပေမယ့်အချိန်မရှိအကျိုးသက်ရောက်မှု [F (2,34) = 1.76; p = 0.19] သို့မဟုတ်အချိုရည်နှင့်သောက်သုံးအုပ်စုအကြားမည်သည့်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု [F (4,44) = 1.32; p = 0.28] ။
ပုံ5။ water- သို့မဟုတ်အီသနော-သောက်သုံးတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ကိုးကားစရာအထွတ်အထိပ် amplitude ။
ရေနှင့်အီသနောသောက်သည့်အုပ်စုများတွင်အမ်ဖက်တမင်း (သို့) ဆားဖြင့်ကုသမှုမပြုမီရည်ညွှန်းအမြင့်ဆုံးသုံးခု၏ (Amp ±± SEM) ပမာဏ (itudesMM) ။ ** p <0.01, *** p <0.001 ။
Doi: 10.1371 / journal.pone.0096337.g005
အရက်သောက်အုပ်စုတစ်စု၏အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်မှု [F (1,18) = 0.04; p = 0.85], [F (2,36) 1.96 = အချိန်လည်းရှိ၏ p = 0.16] သို့မဟုတ်အချိန်နှင့်သောက်သုံးရေအုပ်စုတစ်စု [F (2,36) 0.22 =; p = 0.81] ရည်ညွှန်း T80 တန်ဖိုးများကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ SEM ရည်ညွှန်း T80 တန်ဖိုးများ±ယုတ်သည့်အီသနော-သောက်သုံးကြွက်များအတွက်ရေကိုသောက်သုံးကြွက်များအတွက် 20.5 ± 1.0 နှင့် 19.1 ± 1.3 ခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ ethanol- အတွက်စိတ်ကြွဆေးနှင့်ရေ-သောက်သုံးအုပ်စုများမှတုန့်ပြန်မှာပြသ ပုံ 6။ မှာပြထားတဲ့ amplitude များအတွက်အဖြစ် ပုံ 6Aကုသမှုအနေနဲ့အကျိုးသက်ရောက်ရန်လမ်းကြောင်းသစ် [F (1,19) = 3.01 ရှိ၏ p = 0.099] နှင့်အချိန်တစ်ခုအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည် [F (6,114) 2.30 =; p = 0.04], ဒါပေမယ့်အရက်သောက်အုပ်စုတစ်စု၏အဘယ်သူမျှမသက်ရောက် [F (1,19) = 0.39; p = 0.54] သို့မဟုတ်ကုသမှုနှင့်သောက်သုံးရေအုပ်စုတစ်စုအကြားမဆိုအပြန်အလှန်သက်ရောက်မှု [F (1,19) 0.83 =; p = 0.37] သို့မဟုတ်အချိန်နှင့်ကုသမှု [F (6,114) 1.13 =; p = 0.35] အချိန်နှင့်သောက်သုံးရေအုပ်စုတစ်စု [F (6,114) 0.44 =; p = 0.85] သို့မဟုတ်အချိန်, ကုသမှုနှင့်သောက်သုံးရေအုပ်စုတစ်စု [F (6,114) 0.27 =; p = 0.95] ။
ပုံ6။ water- သို့မဟုတ်အီသနော-သောက်သုံးတိရိစ္ဆာန်များအတွက်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ amplitude နှင့် T80 တုံ့ပြန်မှု။
ရေ (W) - ရေ (W) - သို့မဟုတ်သောက်သုံးသောအုပ်စုများအတွက်ရည်ညွှန်းတန်ဖိုး (ဆိုလိုသည်±± SEM) ၏ရာခိုင်နှုန်းအနေဖြင့်ဆားသို့မဟုတ်အမ်ဖီတမင်းဆေးထိုးခြင်းပြီးနောက် (SC) ထိုးပြီးနောက်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှတုံ့ပြန်မှုများ။ ။ ဆားဓာတ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် * p <80, ** p <0.05, *** p <0.01
Doi: 10.1371 / journal.pone.0096337.g006
အဆိုပါ T80 တန်ဖိုးများအဘို့, ပုံ 6Bကုသမှု၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု [F (1,19) = 17.35 ရှိ၏ p <0.001] နှင့်အချိန် [F ကို (6,114) = 2.42; p = 0.03] နှင့်အချိန်နှင့်ကုသမှုအကြားတစ် ဦး အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု [F (6,114) = 10.28; p <0.001] ။ သောက်သုံးအုပ်စု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိ [F (1,19) = 0.33; p = 0.57], ဒါမှမဟုတ်ကုသမှုနှင့်သောက်သုံးအုပ်စုအကြားမည်သည့်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု [F (1,19) = 0.76; p = 0.40] အချိန်နှင့်သောက်သုံးအုပ်စု [F (6,114) = 1.66; p = 0.14] သို့မဟုတ်အချိန်၊ ကုသမှုနှင့်သောက်သုံးအုပ်စု [F (6,114) = 1.75; p = 0.12] ။
အသက်အရွယ်-မှီခို dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်လွှာမှအပေါ်သက်ရောက်မှုအစောပိုင်းနှောင်းပိုင်းဆယ်ကျော်သက်အတွက် Basal အခြေအနေများအောက်တွင်နှင့်စိတ်ကြွဆေးတုံ့ပြန်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်အဖြစ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ, ကြွက်များ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအရက်သေစာသောက်သုံးခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာပေးဖို့, တစ်ဦး chronoamperometric technique ကိုနှင့်အတူမိမိဆန္ဒအလျောက်အရက်သောက်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်များတွင်ဖြန့်ချိခြင်းနှင့်လွန်ကဲစုံစမ်းစစ်ဆေးပထမဦးဆုံးလေ့လာမှုဖြစ်ပါတယ်လေ့လာခဲ့တယ်။
ရည်ညွှန်း amplitude အတွက်အသက်အရွယ်-မှီခိုကွဲပြားခြားနားမှုအရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်ငယ်ရွယ်ကြွက်များထက်ဆွအပေါ်သို့ပိုပြီး dopamine ဖြန့်ချိကြောင်းပြသပေးသောလျှပ်စစ်ဆွနဲ့ပေါင်းပြီး voltammetry သုံးပြီးယခင်လေ့လာမှုနှင့်အတူသဘောတူညီချက်၌ရှိကြ၏ ။ အချိန်-အမှတ် Stamford (1989) အသုံးပြုသောမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များအတွက်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် PND 30 ခဲ့ပေမယ့် ထိုအချိန်မှစ. လေ့လာမှုများ PND 40-45 န်းကျင် dopamine ၏ Basal extracellular အဆင့်ဆင့်အတွက်ထိပ်ရှိကွောငျးတငျပွခဲ့ကွ - နှင့် dopamine အဲဒီ receptor: D2 သိပ်သည်းဆ , tyrosine hydroxylase အဆင့်ဆင့်အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူကြီးနှစ်ဦးစလုံးထက်နိမ့်နေစဉ် ။ လက်ရှိလေ့လာမှုထို့ကြောင့်အစောပိုင်းနှောင်းပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်ညီမျှမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်, PND 28 နှင့် PND 42, စဉ်အတွင်းနှစ်ဦးကိုအချိန်မှတ်ပါဝင်သည် ။ နှောင်းပိုင်းတွင်ဆယ်ကျော်သက်တိရိစ္ဆာန်များအတွက် amplitude လူကြီးသို့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကနေဖွံ့ဖြိုးမှု dorsal striatum အတွက်ပိုတက်ဆီယမ်ကလိုရိုက်တုံ့ပြန် dopamine များလွှတ်ပေးရန်စွမ်းရည်အတွက်တဖြည်းဖြည်းတိုးပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းညွှန်ပြစောစောမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူကြီးအတွက် amplitude မှအလယ်အလတ်ရှိကြ၏။ ဒါဟာမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လူကြီးအတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine ၏တိုးလာ extracellular အဆင့်ဆင့်၏အစီရင်ခံစာများနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည် , ။ ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအချို့လေ့လာမှုများကိုလည်း PND 45 မှာအထွတ်အထိပ်အဆင့်ဆင့်ကိုပြသ - သူတို့အတူတူ PND န်းကျင်တိုးမြှင့်ပစ်ခတ်မှုနှုန်း၏အစီရင်ခံစာများမှတဆင့်လက်ရှိလေ့လာမှုနှင့်အတူ ပြန်. နိုင်ပါသည် , ။ လက်ရှိလေ့လာမှု Basal extracellular အဆင့်ဆင့်တိုင်းတာမကပိုတက်စီယမ်-သွေးဆောင်လွှတ်ပေးရန်အတွက်မဆိုအထွတ်အထိပ်မရှိဘဲတိုးလာ Basal အဆင့်ဆင့်အတွက်နှုန်းမှာရလဒ်တွေကိုပစ်ခတ်တိုးလာတာဖြစ်နိုင်တယ်။ ထို့ပြင်နျူကလိယထဲမှာပိုတက်စီယမ်-သွေးဆောင် extracellular အဆင့်ဆင့်ဖေါ်ပြခြင်းလေ့လာမှု၏တဦးတည်း PND 42 န်းကျင်မြင့်ဆုံးကိုရောက်ရှိဖို့ accumbens  ဒေသဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုညွှန်ပြပေးသော Stamford (1989) နှင့်လက်ရှိလေ့လာမှုကနေ dorsal striatum ကနေဒေတာတွေကို, မှခြားနား။
Stamford (80) လွှာမှနှုန်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရသော်လည်းအဆိုပါလွှာမှအတိုင်းအတာ, T1989, လက်ရှိလေ့လာမှုအတွက်အသက်အရွယ်အကြားမည်သည့်ကွဲပြားခြားနားမှုထုတ်ဖေါ်ခဲ့ပါဘူး။ ဒီအလွှာမှ၏အတိုင်းအတာအတွက်အတိုင်းအတာများကွဲပြားမှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်; Stamford ဟာကွေး၏ linear တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုအသုံးပြုသော်လည်း T80, အချပ်များနှင့်ကွေး၏ curvilinear တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနှစ်ဦးစလုံးလည်းပါဝင်သည် ။ ဒီလေ့လာမှုမှာရောက်ရှိအဆိုပါပြင်းအားယခင်လေ့လာမှုနဲ့ V အတွက်ပြင်းအားသာတဩမဲများမှာmax ကို ထို့ကြောင့်ရောက်ရှိမရသင့်ပါတယ်။ ဤအခြေအနေများအောက်တွင်လွှာမှနှုန်းကိုတွက်ချက်ဖို့အထွတ်အထိပ်ကွေး၏ linear တစ်စိတ်တစ်ဒေသကိုသုံးပြီးသာ amplitude အပေါ်မှီခိုလွှာမှနှုန်းထားများထုတ်လုပ်ပါလိမ့်မယ် ။ ဒါကြောင့်လည်းအကောင့်သို့ dopamine ပြင်းအားအောက်ပိုင်းရှိရာကွေး၏ curvilinear အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကြာနှင့် dopamine လွှာမှ blockers ဖို့ပိုအထိခိုက်မခံသောကြောင့် T80 ရွေးချယ်ခဲ့သည် , ။ သဘာဝကျကျ, T80 ကိုလည်းလွှဲခွင်ပေါ်မှီခိုဖြစ်ပါသည်, သို့သော်ဤလေ့လာမှုတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်အဖြစ်လွှဲခွင်ထဲမှာကွဲပြားခြားနားမှုကိုအလိုအလျောက်လွှတ်လွှာမှများ၏အချိုးအငယ်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်လွှာမှဆီသို့ပြောင်းရွှေ့ကြောင်းအကြံပြု, T80 အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုမှုကြပါဘူး။ လက်ရှိတွေ့ရှိချက်ထောက်ပံ့ PND 35, 45 နှင့် 60 မှာကြွက်များ၏နျူကလိယ accumbens အတွက်အရေအတွက် microdialysis အသုံးပြုသောနှင့်ထုတ်ယူခြင်းအစိတ်အပိုင်းမကွဲပြားမှုကိုတွေ့မယ့်လေ့လာမှု, လွှာမှနှုန်းမှာတစ်ဦးသွယ်ဝိုက်အတိုင်းအတာဖြစ်ပါတယ် .
လူကြီးအတွက် သာ. ကွီးမွတျပိုတက်စီယမ်-evoked လွှတ်ပေးရန် dopamine ၏ပိုကြီးတဲ့လွှတ်ပေးရန်ရေကူးကန်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်  နှင့်အကြောင်းရင်းများများစွာထိုကဲ့သို့သော tyrosine hydroxylase အားဖြင့် dopamine ပေါင်းစပ်အတွက်အသက်အရွယ်-မှီခိုကွဲပြားခြားနားမှုအဖြစ်ပါဝင်ပတ်သက်နိုင် , , vesicular monoamine Transporter-2 (VMAT-2) -containing တွေ့နေကျမဟုတ်သော အဆိုပါ VMAT-2 ၏, နှင့် kinetics အဖြစ် D2 အဲဒီ receptor တံစဉ်များကို  နှင့် function ကို ။ ဤရွေ့ကားအချက်များလည်းအစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်စိတ်ကြွဆေးပြီးနောက်မြင်ပြီတိုးလာ amplitude ကိုရှင်းပြကူညီနိုင်ဘူး။ တနည်းကား, လက်ရှိဒေတာ nomifensine တုံ့ပြန်အရွယ်ရောက်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ငယ်ရွယ်အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက်ပိုကြီးတဲ့တိုးဖေါ်ပြခြင်းဒေတာတွေနဲ့ကိုက်ညီ  အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်ကြွက် psychoactive တ္ထုများအားဖြင့်ဆွအပေါ်သို့ဖြန့်ချိနိုင်သည့်တစ်အချိုးကျပိုကြီးတဲ့သိုလှောင်မှုရေကူးကန်, ရှိသည်ညွှန်ပြ။ ဒါဟာနောက်ထပ်ဆယ်ကျော်သက်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်စိတ်ကြွဆေးပြီးနောက်စိတ်ကြွဆေး extracellular dopamine အတွက်ပိုကြီးတဲ့တိုးဖေါ်ပြခြင်းဒေတာများကထောက်ခံနေသည် ။ သို့သော်လူကြီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်စိတ်ကြွဆေးပြီးနောက် dopamine ၏အောက်ပိုင်း extracellular အဆင့်ဆင့်ဖေါ်ပြခြင်း microdialysis လေ့လာမှုများရှိပါသည် , တဖနျစိတ်ကြွဆေးလွှတ်ပေးရန်အတွက်တိုး၏ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုသေချာပေါက် extracellular အဆင့်ဆင့်အတွက်တိုးဆိုလိုခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းစနစ် complementing သတင်းအချက်အလက်ထည့်နိုင်သည်မမလည်းထင်ရှားစေတော်မူသော။
T80 အပေါ်အဘယ်သူမျှမအသက်အရွယ်-မှီခိုသက်ရောက်မှုစိတ်ကြွဆေးစိတ်ကြွဆေးအားလုံးအသက်အရွယ်အတွက် dopamine လွှာမှအပေါ်အလားတူသက်ရောက်မှုပြုပြင်ကွောငျးဖျောပွသောတွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက်။ ဤသည်ကိုတဖန်အသက်အုပ်စုများအကြား nomifensine ပြီးနောက်လွှာမှပိတ်ဆို့ထားခြင်း၏ဒီဂရီမကွဲပြားမှုဖေါ်ပြခြင်း, Stamford (1989) မှရလဒ်ကထောက်ခံသည်။ လည်းရှိပါတယ်အဆိုပါစိတ်ကြွဆေး-binding site ကို dopamine Transporter ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုအတွက်အသက်အရွယ်-related ကွဲပြားခြားနားမှု The Transporter အပေါ်ကိုကင်း-binding site ကိုမှ related နေကြသည်အကြံပြုခြင်း, ဒါပေမယ့်မပေးလေ့လာနေ  အရာလွှာမှပေါ်စိတ်ကြွဆေး၏အသက်အရွယ်-မှီခိုသက်ရောက်မှုမတည်ရှိပါဘူးညွှန်ပြနိုင်ဘူး။ သို့သျောလညျး, အချိန်, အသက်နှင့်ကုသမှုအကြားတစ်ဦးအပြန်အလှန်ဆီသို့ဦးတည်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုသူတို့အသက်အရွယ်ပေါ်မူတည်စိတ်ကြွဆေးဖို့အချိန်ကျော်ကွဲပြားခြားနားတုံ့ပြန်ကြောင်းအကြံပြုရှိ၏။ exogenous dopamine လျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်လွန်ကဲစုံစမ်းစစ်ဆေးနောက်ထပ်လေ့လာမှုများလည်း Transporter function ကိုထံမှသီးခြားလွှဲခွင်-မှီခိုလွှာမှကူညီနိုငျ -။ လက်ရှိလေ့လာမှုထုံဆေးတိရိစ္ဆာန်များ၌ပြစ်မှားမိခဲ့သည်အဖြစ်နိုးကြွက်များတွင်လေ့လာရေးကိုလည်းအရေးပါမှုပါလိမ့်မယ်။ အသုံးပြုတဲ့မေ့ဆေးဟာ barbiturate thiobutabarbital (Inactin), gamma-aminobutyric အက်ဆစ်တစ်ဦးအပြုသဘော allosteric modulator တွေကိုကြွက်အတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာနှင့်တည်ငြိမ်မေ့ဆေးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ (ဂါဘမြို့သား) တစ်ဦးက receptors ခဲ့သည် ။ ဂါဘမြို့သားအသက်အရွယ်နှင့်အရက်-အရက်သောက်သမိုင်းပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကွိုးစားအားထုဖြစ်နိုင်သည်  ထို့ကြောင့်ယင်းမေ့ဆေးအသက်အရွယ်သို့မဟုတ်ကုသမှုနှင့်အတူအပြန်အလှန်သဖွငျ့သက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်နိုင်ဘူး။ သို့သော် pentobarbital နောက်ထပ် barbiturate, အ striatum အတွက် dopamine အဆင့်ဆင့်အပေါ်အနည်းငယ်သာသက်ရောက်မှုရှိသည်ဖို့ပြသထားသည် ။ ထို့အပြင်လက်ရှိလေ့လာမှုအတွက်ဖြန့်ချိပိုတက်စီယမ်ကလိုရိုက်ကို အသုံးပြု. သွေးဆောင်ခဲ့သည်နှင့်ဖြန့်ချိအပေါ် GABAergic သေံ၏အရေးပါမှုလျော့သင့်သောအလိုအလျောက်ဖြစ်ရပ်များအပေါ်အားကိုးခဲ့ပါဘူး။ အဆိုပါ dopamine လွှာမှများအတွက်အဖြစ် barbiturates အထူးသ dopamine လွှာမှကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါအစီရင်ခံစာများရှိပါတယ် ဒါပေမယ့်လည်းအသက်အရွယ်သို့မဟုတ်ကုသမှုနှင့်အတူတစ်ဦးအပြန်အလှန်ရှိနိုငျမလားဆိုတာမသေချာပေ။
ခြောက်ပတ်အတွင်းစေတနာအလျောက်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအရက်စားသုံးမှုရေသောက်သုံးထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနိမ့်ကိုကိုးကား amplitude ခဲ့သည်။ အဆိုပါ amplitude အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်ကြွက်များတွင်တွေ့မြင်သူတို့အားအလားတူခဲ့ကြသည်။ သက်ရောက်မှု amplitude တွင်တွေ့မြင်နှင့်မအချိန် uptake ခဲ့ကြသည်ကတည်းကကြောင့်အရက် dopamine များလွှတ်ပေးရန်ရေကူးကန်ထက် dopamine Transporter ထိန်းချုပ်အချက်များအပေါ်သက်ရောက်မှုများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရက်အပြီးထိခိုက်လွှာမှထောက်ပံ့ဒေတာရှိပါတယ်စိတ်ကူးဖြစ်ပါသည် ။ အရက်၏ intraperitoneal ထိုးဖို့ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုထိတွေ့ပြီးနောက် dopamine ၏တိုးလာ extracellular အဆင့်ဆင့်ဖေါ်ပြခြင်း microdialysis ဒေတာလည်းရှိပါတယ် , , , ဤလျော့နည်းသွားလွှတ်ပေးရန် dopamine ၏လက်ရှိတွေ့ရှိချက်မှအတန်ငယ်ဆနျ့ကငျြဖြစ်ပါတယ်။ အစောပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းတိုးမြှင့်ပစ်ခတ်မှုနှုန်းဟာလက်ရှိဒေတာနှင့်အတူ microdialysis ဒေတာပွနျလညျသငျ့မွတစ်လမ်းဖြစ်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမဲ့ဒီထောကျပံ့ပေးရန်မလေ့လာမှုများရှိပါသည်။ ထို့အပြင်မိမိဆန္ဒအလျောက်ဆိုလိုသည်မှာသို့မဟုတ်အတင်းအဓမ္မအရက်သေစာထိတွေ့မှု၏ mode ကိုသည်, neurobiology အပေါ်ကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိစေခြင်းငှါဖေါ်ပြခြင်းလေ့လာမှုများရှိပါသည် .
စိတ်ကြွဆေးနဲ့ကုသတဲ့အခါ, amplitude ဒါမှမဟုတ် T80 အတွက် alcohol- နှင့်ရေ-သောက်သုံးအုပ်စုများအကြားမျှသိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုရှိကြ၏။ သို့သော်အရက်-အရက်သောက်အဖွဲ့ကပြသတိုးပွားလာမှုကြောင့် amplitude, တခုတခုအပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုဆီသို့ဦးတည်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတခုရှိ၏။ ဒီအပြောင်းအလဲတုံ့ပြန်မှုမှဆက်နွယ်နေကြောင်းမပါပေမယ့်, ကြောင့်အရက်စားသုံးမှုအတွက်အပြောင်းအလဲဖြစ်နိုင်သောအရက်-အရက်သောက်အုပ်စု (Data ပြမပါ) အတွက်စိတ်ကြွဆေးဖို့တုန့်ပြန်မှာပိုအပြောင်းအလဲလည်းရှိပါတယ်။ ဤသည်ကိုလည်းအသှေးကိုအရက်ပါဝင်မှုနှုန်းကိုတိုင်းတာမခံခဲ့ရဟုအမည်ရကြောင်း, ဒီလေ့လာမှုနဲ့န့်အသတ်မှထောက်ပြသည်။ အဆိုပါလေ့လာမှု 24 ဇနှင့် access ကိုကန့်သတ်ထားခြင်းကိုခံရကြရသည်မယ်လို့နှင့်သွေးနမူနာများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်စိတ်ဖိစီးမှုတိရစ္ဆာန်၏စားသုံးမှုပုံစံနှောက်ယှက်ဖို့စွန့်စားမယ်လို့တိုင်းတာခံရဖို့, အသွေးအရက်အဆငျ့အဘို့ဘေးလွတ်သော access ကိုအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်တုံ့ပြန်မှုများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီတို့၏အသွေးအရက်အဆင့်ဆင့်အကြားဆက်စပ်မှုကိုထုတ်အုပ်ချုပ်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ သို့သော်ဤလေ့လာမှုမှာတင်ဆက်သည့်စားသုံးမှု data တွေကိုဆင်တူအသက်အရွယ်သို့မဟုတ်စားသုံးမှု Paradigm အတွက် Wistar ကြွက်များကို အသုံးပြု. အရက်၏ neurobiological သက်ရောက်မှုဖေါ်ပြခြင်းအခြားလေ့လာမှုများနှင့်ဆင်တူသည်-။ ဒီအမြင့်မားတဲ့စားသုံးမှုမှကျရောက်နေတဲ့တစ်ဦးချင်းစီ, ဒါပေမယ့်လည်းအထွေထွေလူဦးရေရဲ့ cross-အပိုင်းကနေကျိုးနွံသောက်, မိမိဆန္ဒအလျောက်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအရက်စားသုံးမှုပြီးနောက် neurobiology အတွက်အန္တရာယ်အပြောင်းအလဲများကိုသာကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
စိတ်ကြွဆေးဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအရက်စိတ်ကြွဆေးတုံ့ပြန် dopamine Transporter function ကိုမသက်ရောက်ရှိကြောင်းအကြံပြု, ဒါပေမယ့်လည်း exogenous dopamine ၏လျှောက်လွှာများကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကနေအကျိုးရှိမည်ဟုလွှာမှအချိန်အတွက်အဘယ်သူမျှမကွဲပြားမှုပြီးနောက် -.
ထို့အပွငျနှစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖွယ်လေ့လာတွေ့ရှိချက်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ ပထမဦးစွာအရက်စားသုံးမှုပြီးနောက်ရည်ညွှန်း amplitude အဆိုပါအရက်စားသုံးမှုကာလ, ဆိုလိုသည်မှာ PND 28 ရဲ့အစမှာတိရိစ္ဆာန်များတွင်တွေ့မြင်သူတို့အားဆင်တူသည်။ ဒုတိယအချက်မှာ၎င်းအရက်-သောက်သုံးတိရိစ္ဆာန်များအတွက်စိတ်ကြွဆေးအပြီး amplitude အတွက်တိုး၏အရွယ်အစားနှောင်းပိုင်းဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်, ဆိုလိုသည်မှာ PND 42 ဆင်တူသည်။ ဤအတွေ့ရှိချက်ပြောင်းလဲလွှတ်ပေးရန်ရေကူးကန်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အာရုံခံအတွက် dopamine ၏သိုလှောင်မှုရေကူးကန်မှဆက်စပ်ခြင်းရှိမရှိ elucidated ခံရဖို့နေဆဲဖြစ်သည်။ အသက်အရွယ်-တိကျတဲ့သက်ရောက်မှုများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့် ပတ်သက်. ကောက်ချက်ရေးဆွဲရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်လက်ရှိလေ့လာမှုအရွယ်ရောက်ပြီးသူအရက်-သောက်သုံးကြွက်အုပ်စုတစ်စုမပါဝင်ခဲ့ချေ။ သို့သော်အသက်အရွယ်-တိကျတဲ့သက်ရောက်မှု၏လက္ခဏာများထိခိုက် dopamine လွှာမှပြသသောဆယ်ကျော်သက်ရွယ်အရက်-ထိတွေ့ကြွက်၏လေ့လာမှုများအကြားကွာခြားချက်များတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်  နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအရက်-ထိတွေ့ကြွက်များနှင့်မျောက်များတိုးလာလွှာမှပြသသော, ဒါပေမယ့် evoked dopamine လျတ်မသက်ရောက်မှု၏လေ့လာမှုများ , ။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများသည်ထို့ကြောင့်အရက်ထိတွေ့မှုများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအသက်အရွယ်အတွက်၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနောက်ကွယ်ကယန္တရားများစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားဖြစ်လိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို့သော tyrosine hydroxylase အဖြစ်အချက်များ, dopamine အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆနှင့် function ကိုနှင့် vesicular monoamine Transporter သို့ထပ်မံစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလွှတ်ပေးရန်ရေကူးကန်နှင့် dopamine ၏သိုလှောင်မှုရေကူးကန်အပေါ်ဖြစ်နိုင်သောအသက်အရွယ်-တိကျတဲ့အရက်ဆိုးကျိုးများအပေါ်အချို့သောအလင်းကိုသွန်းကိုကူညီနိုင်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာမှဤအချက်များဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအရက်အပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးကြပြီမဟုတ်။
အဆိုပါဒေတာများကိုလွှတ်ပေးရန် dopamine ၏ရေကူးကန်အသက်အရွယ်နှင့်အတူတိုးပွါးကြောင်းအကြံပြုသည်ယခင်လေ့လာမှုများ supporting, အသက်နှင့်အတူ evoked dopamine လျတ်တစ်တဖြည်းဖြည်းတိုးမြှင့်ပြသပါ။ ဆနျ့ကငျြ, အသက်နှင့်အတူ evoked လျတ်အတွက်တဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းသွား dopamine-releasing မူးယစ်ဆေးဝါးများဖို့အလားအလာကသူတို့ကိုပိုပြီးအထိခိုက်မခံအောင်, အသက်ပျိုတိရိစ္ဆာန်များအတွက် dopamine တစ်အချိုးကျပိုကြီးတဲ့သိုလှောင်မှုရေကူးကန် supporting, စိတ်ကြွဆေးတုံ့ပြန်တွင်တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အရက်စားသုံးမှုလျတ်အတွက်ရေသောက်သုံးထိန်းချုပ်မှုထက်နိမ့်ခဲ့ရသည်။ , အရက် dopamine များလွှတ်ပေးရန်ရေကူးကန်အပေါ်သက်ရောက်မှုနှင့်ဤစွဲလမ်းနှင့် dorsal striatum အတွက် dopamine သည့်စနစ်ပါဝင်သောကအခြားစိတ်ရောဂါ diagnoses မှအားနည်းချက်များအတွက်သက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါညွှန်ပြ။
အဆိုပါစာရေးဆရာအတိုင်းအတာများဆွေးနွေးမှုများများအတွက်နည်းပညာဆိုင်ရာအကူအညီနှင့်ဒေါက်တာမာတင် Lundblad ဘို့မစ္စ Marita Berg ကကျေးဇူးတင်လိုပါသည်။
ပဋိသန္ဓေနှင့်စမ်းသပ်ချက်ဒီဇိုင်း: SP IN ။ SP: အဆိုပါစမ်းသပ်ချက်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: SP IN ။ SP: စက္ကူရေးသားခဲ့သည်။
1. မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်မဆင်မခြင်အပြုအမူ - တစ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအမြင်။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း 1992: 12-339 ။
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကနေငယ်ရွယ်ဖို့မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏ K ကို Kandel DB (1984) ပုံစံများ
လူကြီး: II ကို။ တိုးတက်မှု၏ sequences ။ နံနက် J ကိုပြည်သူ့ကျန်းမာရေး 74: 668-672 ။
Doi: 10.2105 / ajph.74.7.668
L ကို, chiu WT, et al Conway K ကို Dierker L ကို, Glantz M က။ (2009) ကလော
ကိစ္စ '' gateway '? မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုစတင်များ၏အမိန့်အကြားအသင်းအဖွဲ့များ
နှင့်အမျိုးသား Comorbidity လေ့လာမှုအတွက်မူးယစ်ဆေးမှီခို၏ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ
ပွား။ Psychol Med 39: 157-167 ။
Doi: 10.1017 / s0033291708003425
4. အန်သိုနီ JC, Petronis KR (1995) အစောပိုင်း-စတင်ခြင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးပြဿနာများ၏အန္တရာယ်။ 40-9: မူးယစ်ဆေးအရက် 15 မူတည်တယ်။
BF, Dawson DA (1997) အရက်သေစာအသုံးပြုမှုစတင်ခြင်းမှာခေတ်နှင့်၎င်း၏အသင်းအဖွဲ့
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကနေရလဒ်တွေကို: DSM-IV အရက်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်မှီခိုနှင့်အတူ
longitudinal အရက် epidemiological စစ်တမ်း။ J ကို Subst အလွဲသုံးမှု 9: 103-110 ။
ပထမဦးဆုံးအရက်အသုံးပြုမှုမှာ DJ သမား, Adlaf EM, Offord DR, Ogborne AC အ (2000) ခေတ်: တစ်
အရက်မမှန်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အန္တရာယ်အချက်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု
157: 745-750 ။
Doi: 10.1176 / appi.ajp.157.5.745
F ကို, သူ J ကို, Hodge ကို C (2007) ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် cortical ဖှံ့ဖွိုးတိုး: တစ်ဝေဖန်
စွဲလမ်းများအတွက်အားနည်းချက်များ၏ကာလ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ 86:
Doi: 10.1016 / j.pbb.2006.12.001
ဦးစားသညျလူသားတို့အားဖြင့်စော်ကား Chiara, G, Imperato တစ်ဦးက (1988) မူးယစ်ဆေးဝါး
၏ mesolimbic စနစ် Synaptic dopamine ပြင်းအားတိုးမြှင့်
လွတ်လပ်စွာကြွက်ရွေ့လျား။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်နိုင်ငံ 85: 5274-5278 ။
Doi: 10.1073 / pnas.85.14.5274
9. Koob gf, စွဲလမ်း၏ Volkow ND (2010) Neurocircuitry ။ Neuropsychopharmacology 35: 217-238 ။
Doi: 10.1038 / npp.2009.110
10 ။ Everitt
BJ, Robbins TW (2013) ကို dorsal striatum ဖို့ ventral မှ:
မူးယစ်ဆေးစွဲ၎င်းတို့၏အခန်းကဏ္ဍ၏အမြင်များ Devolving ။ neuroscience Biobehav ဗျာ
11 ။ လှံကို LP (2000) ကဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်နှင့်အသက်အရွယ်-related အပြုအမူသရုပ်။ neuroscience Biobehav ဗြာ 24: 417-463 ။
12 ။ Stamford
ဂျေအေကြွက် nigrostriatal dopamine ၏ (1989) ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အိုမင်း
စနစ်ကအစာရှောင်ခြင်းသိသိ voltammetry နှင့်အတူလေ့လာခဲ့သည်။ J ကို Neurochem 52: 1582-1589 ။
Doi: 10.1111 / j.1471-4159.1989.tb09212.x
13 ။ Marco
EM, Adriani W က, Ruocco LA က, et al Canese R ကို, Sadile AG က။ (2011)
methylphenidate မှ Neurobehavioral အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်: အစောပိုင်း၏ပြဿနာ
ဆယ်ကျော်သက်ထိတွေ့မှု။ neuroscience Biobehav ဗြာ 35: 1722-1739 ။
Doi: 10.1016 / j.neubiorev.2011.02.011
14 ။ Badanich
Ka, Maldonado လေး, Kirstein CL (2007) နာတာရှည်အီသနောထိတွေ့နေစဉ်အတွင်း
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နျူကလီးယပ်အတွက် Basal dopamine တိုးပွါး septi accumbens
လူကြီးကာလအတွင်း။ အရက် Clin Exp Res 31: 895-900 ။
Doi: 10.1111 / j.1530-0277.2007.00370.x
15 ။ Sahr
AE, Thielen RJ, Lumeng L ကိုလီ TK, McBride WJ (2004) Long-တည်တံ့
periadolescent ပြီးနောက် mesolimbic dopamine စနစ်၏ပြောင်းလဲ
အရက်- သာ. နှစ်သက်ကြွက်များအားဖြင့်အီသနောအရက်သောက်။ အရက် Clin Exp Res 28:
Doi: 10.1097 / 01.alc.0000125344.79677.1c
16 ။ Littrell
OM, Pomerleau က F, Huettl P ကို, Surgener S က, McGinty JF, et al .. (2012)
လူလတ်ပိုင်း Gdnf heterozygous အတွက် Enhanced dopamine Transporter လှုပ်ရှားမှု
ကြွက်။ 33 e427-421: 414 အိုမင်းခြင်းဟာ Neurobiol ။
17 ။ Gerhardt
ယင်းအပေါ်မှတ်တမ်းတင်မီဒီယာများဖွဲ့စည်းမှု၏ GA, ဟော့ဖ်မန်း AF (2001) အကျိုးသက်ရောက်မှု
Nafion-coated ကာဗွန်ဖိုင်ဘာ microelectrodes ၏တုံ့ပြန်မှုကိုအသုံးပြုပြီးတိုင်းတာ
မြန်နှုန်းမြင့် chronoamperometry ။ J ကို neuroscience နည်းလမ်းများ 109: 13-21 ။
18 ။ Lundblad
M က, AF Bjerken S က, Cenci MA, Pomerleau က F, Gerhardt GA, et al ။ (2009)
နာတာရှည်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း L-DOPA ကုသမှု dopamine ပြောင်းလဲမှုများ induces
ဖြန့်ချိ။ J ကို Neurochem 108: 998-1008 ။
Doi: 10.1111 / j.1471-4159.2008.05848.x
19 ။ Paxinos, G, Watson ကို C (2007) Stereotaxic Coordinates အတွက် Rat ဦးနှောက်။ နယူးယောက်: ပညာရေးဆိုင်ရာနှိပ်ပါ။
20 ။ Sherwood
မိုင်, Timiras PS (1970) ကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲကြွက်ဦးနှောက်၏တစ်ဦးက stereotaxic Atlas ။
ဘာကလေ ,: ကယ်လီဖိုးနီးယားစာနယ်ဇင်းတက္ကသိုလ်။ 209 စ။ (စ။ 214-203 illus ။ ) စ။
21 ။ Friedemann
dopaminergic အပေါ်အိုမင်း၏ MN, Gerhardt GA (1992) ဒေသတွင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများ
အဆိုပါ Fischer-344 ကြွက်များတွင် function ကို။ 13-325: 332 အိုမင်းခြင်းဟာ Neurobiol ။
22 ။ Walker က
QD, et al မောရစ် SE, Arrant AE, Nagel JM, Parylak S က။ (2010) Dopamine
လွှာမှ inhibitors သော်လည်းမ dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက် သာ. ကွီးမွတျတိုးသွေးဆောင်
မော်တာအပြုအမူနှင့်ထက်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်များတွင် extracellular dopamine
အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးကြွက်များ။ J ကို Pharmacol Exp Ther 335: 124-132 ။
Doi: 10.1124 / jpet.110.167320
23 ။ ချိတ်
အတွင်းက MS, ဂျုံးစ် GH, Neill DB, တရားမျှတမှု JB Jr (1992) တစ်ဦးချင်းခြားနားချက်
စိတ်ကြွဆေးာင်း: ထိုး-မှီခိုသက်ရောက်မှု။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျး
ပြုမူနေ 41: 203-210 ။
24 ။ Dellu
F ကို, Piazza PV, Mayo အဘိဓါန် W က, က Le Moal က M ရှိမုန် H ကို (1996) တွင်လက်ဆောင်ပစ္စည်းအသစ်အဆန်း-ရှာကြံ
လူကိုအာရုံ-ရှာကြံရို။ Neuropsychobiology 34: 136-145 ။
Doi: 10.1159 / 000119305
25 ။ Nakano
၏ဇီဝြဖစ်က M, Mizuno T က (1996) ခေတ်-related အပြောင်းအလဲများ
ကြွက် striatum အတွက် neurotransmitters: တစ် microdialysis လေ့လာမှု။ Mech အို
dev 86: 95-104 ။
26 ။ Badanich
Ka, Adler KJ, Kirstein CL (2006) ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအတွက်လူကြီးများအနေဖြင့်ကွာခြား
ထဲမှာကိုကင်းအခွအေနေအရပျကို preference ကိုနှင့်ကိုကင်း-သွေးဆောင် dopamine
နျူကလိယ septi accumbens ။ EUR J ကို Pharmacol 550: 95-106 ။
Doi: 10.1016 / j.ejphar.2006.08.034
27 ။ Philpot
RM, Wecker L ကို, Kirstein CL (2009) ထပ်ခါတစ်လဲလဲအီသနောထိတွေ့နေစဉ်အတွင်း
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် dopaminergic output ကို၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းပွောငျးလဲ
ယင်းနျူကလိယကနေ septi accumbens ။ int J ကို Dev မှ neuroscience 27: 805-815 ။
Doi: 10.1016 / j.ijdevneu.2009.08.009
28 ။ Teicher
dopamine အဲဒီ receptor များအတွက် MH, Andersen က SL, Hostetter JC Jr (1995) အထောက်အထား
နျူကလိယ striatum အတွက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူကြီးအကြား pruning သော်လည်းမ
accumbens ။ ဦးနှောက် Res Dev မှဦးနှောက် Res 89: 167-172 ။
29 ။ Mathews
hyporesponsiveness အတွက် IZ, ရေ: P, မက်ကော်မစ် CM (2009) အပြောင်းအလဲများမှ
tyrosine hydroxylase အတွက်စူးရှစိတ်ကြွဆေးနှင့်အသက်အရွယ်ကွဲပြားခြားနားမှု
ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်များတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုကျော်ဦးနှောက်ထဲမှာ immunoreactivity ။
dev Psychobiol 51: 417-428 ။
Doi: 10.1002 / dev.20381
30 ။ Laviola
, G, Pascucci T က, Pieretti S ကို (2001) Striatal dopamine ာင်းရန်
periadolescent D-စိတ်ကြွဆေးသော်လည်းမအရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များဖြစ်သည်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျး
ပြုမူနေ 68: 115-124 ။
31 ။ Gazzara
RA, Andersen က SL (1994) apomorphine-သွေးဆောင်ပွောငျးလဲ၏ ontogeny
neostriatal dopamine ၏လွှတ်ပေးရန်: ပိုတက်စီယမ်-evoked လွှတ်ပေးရေးအပေါ်သက်ရောက်မှု။
Neurochem Res 19: 339-345 ။
Doi: 10.1007 / bf00971583
32 ။ McCutcheon je, Marinelli M (2009) ခေတ်ကိစ္စရပ်များ။ EUR J ကို neuroscience 29: 997-1014 ။
Doi: 10.1111 / j.1460-9568.2009.06648.x
33 ။ Wong က
WC, Ford ကား Ka, Pagels NE, McCutcheon je, Marinelli M (2013) ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း
electrophysiological သက်သေအထောက်အထား။ J ကို neuroscience 33: 4913-4922 ။
Doi: 10.1523 / jneurosci.1371-12.2013
34 ။ Stamford
အတွက်ဂျာ Kruk ZL, Millar J ကို, Wightman RM (1984) Striatal dopamine လွှာမှ
ကြွက်: အစာရှောင်ခြင်းသိသိ voltammetry အားဖြင့် Vivo ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၌တည်၏။ neuroscience လက်တ 51:
35 ။ Wightman
dopamine extracellular အာရုံစူးစိုက်မှု၏ RM, Zimmerman JB (1990) ထိန်းချုပ်ရေး
ကြွက်များတွင်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့စီးဆင်းမှုနှင့်လွှာမှအားဖြင့် striatum ။ ဦးနှောက် Res ဦးနှောက် Res ဗြာ 15:
36 ။ Zahniser
ရော်ဘာ, Dickinson SD, Gerhardt GA (1998) High-Speed ​​ကို chronoamperometric
dopamine ရှင်းလင်းရေး၏လျှပ်စစ်တိုင်းတာ။ နည်းလမ်းများ Enzymol 296:
37 ။ Matthews က
M က, Bondi ကို C, တောရက်စ်, G, Moghaddam B က (2013) လျှော့ချ presynaptic dopamine
ဆယ်ကျော်သက် dorsal striatum အတွက်လှုပ်ရှားမှု။ Neuropsychopharmacology 38:
Doi: 10.1038 / npp.2013.32
38 ။ Truong
JG, et al Wilkins DG, Baudys J ကို, Crouch DJ သမား, ဂျွန်ဆင်-Davis က KL ။ (2005)
vesicular monoamine အတွက်ခေတ်-မှီခိုစိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်ပွောငျးလဲ
Transporter-2 function ကို: neurotoxicity များအတွက်ဂယက်ရိုက်။ J ကို Pharmacol Exp
Ther 314: 1087-1092 ။
Doi: 10.1124 / jpet.105.085951
39 ။ Volz
တီဂျေ, Farnsworth SJ, Rowley SD, Hanson ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, Fleckenstein AE (2009)
dopamine သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် vesicular အတွက်ခေတ်-မှီခိုကွဲပြားခြားနားမှု
monoamine Transporter-2 function ကိုနှင့်အဘို့မိမိတို့ဂယက်ရိုက်
စိတ်ကြွဆေး neurotoxicity ။ synapses 63: 147-151 ။
Doi: 10.1002 / syn.20580
40 ။ Benoit-Marand
corticoaccumbens ၏ M က, O'Donnell P ကို ​​(2008) D2 dopamine မော်ဂျူ
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း Synaptic တုံ့ပြန်မှုအပြောင်းအလဲများကို။ EUR J ကို neuroscience 27:
Doi: 10.1111 / j.1460-9568.2008.06107.x
41 ။ Cass
WA, ကြွက်များတွင် dopamine လွှာမှ၏ Vivo အကဲဖြတ်ခုနှစ်တွင် Gerhardt GA (1995)
medial prefrontal cortex: dorsal striatum နှင့်နျူကလိယနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်
accumbens ။ J ကို Neurochem 65: 201-207 ။
Doi: 10.1046 / j.1471-4159.1995.65010201.x
42 ။ Cass
exogenous ၏ WA, Zahniser ရော်ဘာ, Flach Ka, Gerhardt GA (1993) ရှင်းလင်းခြင်း
ကြွက် dorsal striatum နှင့်နျူကလိယအတွက် dopamine accumbens: များ၏အခန်းကဏ္ဍ
ဇီဝြဖစ်ခြင်းနှင့်ဒေသအလိုက်လျှောက်ထားလွှာမှ inhibitors ၏ဆိုးကျိုးများ။ J ကို Neurochem
61: 2269-2278 ။
Doi: 10.1111 / j.1471-4159.1993.tb07469.x
43 ။ Miller က
EM, et al Pomerleau က F, Huettl P ကို, စယ် VA သို့, Gerhardt GA ။ (2012) က
ADHD ပြပွဲ၏ကောက်ကာငင်ကာသွေးတိုးရောဂါနှင့် Wistar ကျိုတိုကြွက်မော်ဒယ်များ
အဆိုပါ striatum အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်လွှာမှအတွက် Sub-ဒေသဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှု
နှင့်နျူကလိယ accumbens ။ Neuropharmacology 63: 1327-1334 ။
Doi: 10.1016 / j.neuropharm.2012.08.020
44 ။ ဓာတ်ခွဲခန်းတိရစ္ဆာန်များအတွက်ငါး RE (2008) မေ့ဆေးနှင့် Analgesia ။ San Diego မှ: ပညာရေးဆိုင်ရာနှိပ်ပါ။
45 ။ ငွေရောင်
စဉ်အတွင်းအရက်သေစာ Response မှဂါဘမြို့သားများဟာ MM (2014) ပံ့ပိုးမှုများကို
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်: preclinical နှင့်လက်တွေ့လေ့လာမှုများကနေ Insights ။ Pharmacol
46 ။ Semba
serotonergic လှုပ်ရှားမှု K ကို Adachi N ကို, Arai T က (2005) နည်းပြများနှင့်
သွေးကြောသွင်းထုံဆေးကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ကြွက်များတွင်သတိမေ့ခြင်း။ မေ့ဆေးဗေဒ 102:
Doi: 10.1097 / 00000542-200503000-00021
47 ။ Keita
H ကို, Lecharny JB, Henzel: D, Desmonts JM, Mantz J ကို (1996) ၏တားစီး Is
ဃထုံဆေးရဲ့ညှို့အရေးယူမှုမှသက်ဆိုင်ရာ dopamine လွှာမှ? br
J ကို Anaesth 77: 254-256 ။
Doi: 10.1093 / bja / 77.2.254
48 ။ Pascual
M က, Boix J ကို, Felipo V ကို, Guerri ကို C (2009) ထပ်ခါတစ်လဲလဲအရက်အုပ်ချုပ်ရေး
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း mesolimbic dopaminergic ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်စေနှင့်
glutamatergic စနစ်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်အရက်စားသုံးမှုကိုအားပေးအားမြှောက်။ J ကို
Neurochem 108: 920-931 ။
Doi: 10.1111 / j.1471-4159.2008.05835.x
49 ။ Spanagel R ကို (2003) အရက်စွဲသုတေသန: တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များမှသည်ဆေးခန်းမှ။ အကောင်းဆုံး Pract Res Clin Gastroenterol 17: 507-518 ။
50 ။ Adermark
L ကို, Jonsson S က, Ericson M က, Soderpalm B က (2011) ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအီသနော
စားသုံးမှုဟာ dorsolateral အတွက် endocannabinoid-အချက်ပြ depresses
ကြွက်၏ striatum ။ Neuropharmacology 61: 1160-1165 ။
Doi: 10.1016 / j.neuropharm.2011.01.014
51 ။ Garcia-Burgos
အီသနောစားသုံးမှု၏: D, ဇာလက F, Manrique T က, Gallo ပြောတာကတော့ M (2009) ပုံစံများအတွက်
preadolescent, ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်ဝယ်ယူအောက်တွင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ Wistar ကြွက်,
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့် relapse ကဲ့သို့အခြေအနေ။ အရက်: လက်တွေ့နှင့်
စမ်းသပ်သုတေသန 33: 722-728 ။
Doi: 10.1111 / j.1530-0277.2008.00889.x
52 ။ Steensland
et al P ကို, Fredriksson ငါ Holst S က, Feltmann K ကို Franck J ကို။ (2012) က
monoamine stabilizer (-) - OSU6162 မိမိဆန္ဒအလျောက်အီသနောစားသုံးမှု attenuates နှင့်
နျူကလိယ accumbens အတွက်အီသနော-သွေးဆောင် dopamine output ကို။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု
72: 823-831 ။
Doi: 10.1016 / j.biopsych.2012.06.018
53 ။ Budygin
et al EA ၏, ယောဟန်အီး, Mateo Y ကို, Daunais JB, Friedman DP ။ (2003) နာတာရှည်
အီသနောထိတွေ့မှု၏ striatum အတွက် presynaptic dopamine function ကိုပွောငျးလဲ
မျောက်: တစ်ပဏာမလေ့လာမှု။ synapses 50: 266-268 ။
Doi: 10.1002 / syn.10269
54 ။ Budygin
EA ၏, Oleson eb, Mathews က TA, မရှိခြင်း AK, Diaz MR, et al ။ (2007) သက်ရောက်မှုများ
ကြွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine လွှာမှပေါ်နာတာရှည်အရက်ထိတွေ့မှုနှင့်
caudate putamen ။ Psychopharmacology (Berl) 193: 495-501 ။